DAAWO:Ciidamada Somaliland oo wajahaya dagaal labo dhinac ah, Xiisada G. Sanaag, Ciidamadii ugu badnaa oo kusii qul qulaya & Jabhadda Caarre oo – Puntlandtimes
BADHAN(P-TIMES)- Xiisadda dagaal ee u dhaxaysa dhinacyada Puntland iyo Somaliland ayaa 72-dii saac ee ugu dambaysay sii xoogaysanaysay xili ciidmada Puntland iyo Somaliland ay kuwada sugan yihiin duleedka degmada Yubbe ee gobolka Sanaag.
Gelinkii hore ee saaka ayaa waxaa dhinaca ciidamada Somaliland waxaa gaaray in ka badan 24 Tikniko ah oo ay leeyihiin ciidaaada Somaliland, kuwaas ka baxay saldhigyo ku yaala deegaano ka tirsan goboladda Sool, Sanaag iyo Togdheer oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Somaliland.
Jiidaha hore ee deegaanka Yubbe ayaa gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo isugu jira kuwa Daraawiishta ee gobolka Sanaag, kuwaas ka baxay deegaano ka tirsan Buuraleeyda Calmdaw iyo deegaano ay hore ay ugu sugnaayeen.
Masuuliyiinta Puntland ee gobolka Sanaag ayaa xiligan badankood ku sugan duleedka Yubbe gaar ahaan taliska ciidamada, waxaana ay sheegeen inay deegaanka u tageen sidii Somaliland uga difaaci lahaayeen.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in hogaamiyaha Jabhadda xornimo u dirirka Somaliland Korneyl Caarre uu ku biiray dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland.
Caarre oo maalmo ka hor warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe ayaa digniin culus u diray xukuumadda Muuse Biixi, wuxuuna sheegay inuu qaadan doono wixii cawaaqib xumo ah ee ka yimaada xiisadaha kasoo cusboonaaday gobolka Sanaag hadii uusan ciidamadiisa Muuse Biixi kala bixin deegaanada xiligani ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag.
Saraakiisha ciidamada iyo Beelaha goboladda Sool iyo Sanaag ayuu ugu baaqay in ay dagaal adag la galaan ciidamada Somaliland isla markaasna ay ka qabsadaan deegaanada ciidamada Somaliland ay kaga sugan yihiin goboladaasi.